उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई अब अस्पताल... :: विवेक राई :: Setopati
उपत्यकामा कोरोना संक्रमितलाई अब अस्पताल होइन, आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरिने तीन वटा ठाउँमा दुई हजार संक्रमितलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर बनाइँदै
विवेक राई काठमाडौं, असार २५
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले तीन वटा ठाउँमा दुई हजार संक्रमितलाई राख्न मिल्ने गरी आइसोलेसन सेन्टर बनाउन सुरू गरिएको जानकारी दिए। 'कीर्तिपुर, खरिपाटी र मनमोहन अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टर बनाउने काम अघि बढिसकेको छ,' उनले भने।
काम अघि बढाउँदै भएका बेडमा थप कति बेड बढाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले निगरानी गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले भने, 'हामीले ठ्याक्कै कति क्षमताको बनाउने भनेर टुंगो गरेका छैनौं। अहिलेलाई दुई हजार बनाउने भन्ने हो तर त्यहाँ ठाउँ र क्षमता हेरेर तीन हजार पनि पुग्नसक्छ।'
अहिले पनि त्यहाँ तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गरिएर ल्याइएका नेपालीहरूलाई राखिँदै आइएको छ।
गत फागुन ४ गते चीनको वुहानबाट १ सय ८५ नेपालीलाई उद्धार गरेर खरिपाटी क्वारेन्टिनमै राखिएको थियो।
प्रवक्ता गौतमले भने, 'संक्रमित हुनेबित्तिकै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्दैन। अहिले पनि अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गरिएको हो। लक्षण कडा देखिए वा स्वास्थ्यमा समस्या आएमात्र अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अब त्यसरी नै संक्रमितहरूलाई आइसोलेसेन सेन्टरमा भर्ना गर्छौं।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २५, २०७७, १८:२१:००